Siyaasiyiinta ismaamulka Nyeri oo meesha ka saaray wadahadal lala yeelanaya mucaaradka
Qaar ka mid ah hoggaamiyaasha siyaasadeed ee ka soo jeedo ismaamulka Nyeri ayaa sheegay inuusan jiri doonin wax wadahadal ah oo ku saabsan doorasho mar kale la qabanaya oo dhex maraya garabka mucaaradka Nasa iyo muxaafidka jubilee.
Madaxdan oo uu hor kacaya wasiirkii hore ee dowlad wadaajinta dhawaana loo dhiibay wasaarada beeraha Mwangi Kiunjuri ayaa carabka ku dhuftay in xubnaha Nasa laga doonayo inay aqoonsadaan madaxtinimada Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa Willaim Ruto.
Gudoomiyaha ismaamulka Nyeri Mutahi Kahiga, iyo mudanaha degaanka Nyeri Wambugu Ngunjiri ayaa laamaha amaanka ka difaacay eedeymaha loo soo jeediyay ee ah inay sameyeen dafiraad ka dhan ah amarada maxkamada.
Mr Kiunjuri ayaa hoosta ka xariiqay in siyaasiyiinta mucaaradka aysan dowlada ku dhaliili Karin inay iska dhaga tirtay amar maxkamadeed iyadoo dhanka kale ay sameyeen dhaarasho sharci darro ah.
Wasiirka beeraha ayaa soo dhaweeyay bayaan ka soo baxay 11 ka mid ah safiirada wadamada kale ee caalamka ku matalo Kenya oo ay Raila Odinga ugu baqeen inuu Mr. Kenyatta u aqoonsaado inuu yahay hoggaamiye si sharci ah lagu soo doortay.
Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo madaxa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka uu tageeray jawaabtii uu hoggaamiyaha urur weynaha mucaaradka Nasa ka bixiyay baaqii safiirada wadamada shisheeye.
Raila Odinga ayaa danjirayaasha u sheegay inay faraha kala baxaan arrimaha dalka oo sida uu hadalka u dhigay Kenyaanka ay xallin karaan.
← Turkiga oo Maraykanka ku eedeyay inuu hubeynaya argagixisada
Wasaaradda deggaanka ee dalka soo soo saartay digniin ku aadan roobabka La Nina →